कस्तो अवस्थामा हुन्छ पत्थरी, कतै तपाईमा पनि यि समस्या त देखिएका छैनन् ? – Etajakhabar
कस्तो अवस्थामा हुन्छ पत्थरी, कतै तपाईमा पनि यि समस्या त देखिएका छैनन् ?
डा. राकेशकुमार साह बेरियाट्रिक तथा ग्यास्ट्रो सर्जन विश्वमा नै पित्तथैलीको पत्थरी झिक्न गरिने अप्रेसन सबैभन्दा धेरै गरिने अप्रेसनअन्तर्गत पर्छ । पित्तथैलीको पत्थरीको एक मात्र उपचार अप्रेसन गरेर निकाल्नु हो । सामान्यतः पित्तथैलीको पत्थरीका बिरामीमा त्यस्तो कुनै लक्षण देखिँदैन । अरू कुनै कारणले पेटको भिडियो एक्सरे गर्दा पित्तथैलीमा पत्थरी देखिन सक्छ । सोही आधारमा उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो पत्थरी हुनेमध्ये अधिकांशलाई पेट दुख्ने समस्या देखापर्छ । सामान्यतया पित्तथैलीको पत्थरी भएका मानिसमा देखापर्ने लक्षणबारे डा। राकेशकुमार साह यसो भन्छन् स्
पित्तथैलीको पत्थरीबाट कमलपित्त ९जन्डिस०, अग्नाशयको संक्रमण, पित्तथैलीको क्यान्सरजस्ता समस्या देखापर्न सक्छ । दुखाइ कम हुने कारण कतिपय बिरामी अप्रेसन गरेको चारदेखि ६ घन्टाभित्रै हिँडडुल गर्न सक्छन् । सामान्य मानिससरह खानेकुरासमेत खान सक्छन् ।
अप्रेसन गरेको २४ घन्टामा बिरामीलाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज गर्न पनि सकिन्छ । अप्रेसनको ४८ देखि ७२ घन्टामा बिरामी सामान्य जीवनशैलीमा कामकाज गर्न सक्ने हुन्छन् ।नयाँ पत्रिकाबाट
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ३१, २०७४ समय: ८:४९:०७